Breaking News Archives - नेपाल आज
Breaking News	Breaking News
पहिलो चरणकाे निर्वाचन ३ वटा प्रदेशमा मात्रै, प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ काे निर्वाचन जेठ ३१
Posted on: April 22, 2017April 22, 2017Posted by: netra
वैशाख ९ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने भएको छ । शनिबार प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत मधेश केन्द्रीत दलबीचको पाँच घण्टा लामो छलफलमा दुईचरणमा निर्वाचन गर्नेलगायत तीन बुँदे सहमति भएको हो । तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन सहित अगाडि बढाउने, दुई चरणमा चुनाव गर्ने, […]
सरकार र मोर्चाबीच सहमति, स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरण
वैशाख ९ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत मधेश केन्द्रीत दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेलगायत तीन बुँदे सहमति भएको हो । तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन सहित अगाडि बढाउने, दुई चरणमा चुनाव गर्ने, आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसि यससम्बन्धमा […]
मुस्ताङमा तिर्थयात्री सवार बस दुर्घटना हुँदा पाँचको मृत्यु, १२ गम्भीर
Posted on: April 22, 2017Posted by: netra
वैशाख – ९ । मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथको दर्शन गरेर सदरमुकाम जोमसोम फर्किदै गरेको तिर्थयात्री सवार बस कागबेनीमा दुर्घना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको छ । सो दुर्घटनामा ३० जना घाइते भएका छन् । सो दुर्घटनामा ३ जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको थियो भने दुईको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । मृतक […]
पूर्वशिक्षक पौडेललाई सरकारले दश लाख रुपैयाँ दिने
Posted on: April 17, 2017Posted by: netra
बैशाख – ४ । पूर्वशिक्षक कृष्णप्रसाद पौडेललाई सरकारले दश लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्घखाँची ठूलोपोखराका शिक्षक पौडेलले कम उचाइ र वजन भएको शिक्षकको रुपमा आफ्नो नाम गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्डमा लेखाउने प्रयास गरे प्रश्चात् उनी चर्चामा आएका थिए । शिक्षक पौडेलको वजन १२ किलो र उचाई साढे दुई फीट छ । […]
मधेसमा मोर्चाले केही बिगार्न सक्दैन, चुनावबाट पछि हट्न आवश्यक छैन
Posted on: April 17, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–किशोरकुमार विश्वास, अध्यक्ष, बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी यो कथित मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन भन्ने जुन मोर्चाहरु छन् यिनीहरुको उद्देश्य, पृष्ठभूमि र वास्ताविकता फरक छ । रुपमा हेर्दा यिनीहरुले जनताको अधिकारको कुरा उठाएको जस्तो लाग्छ । सारमा हेर्दा यिनीहरुको काम नै नेपालमा राजनीति अस्थिरता मच्चाउने, संक्रमणकाल लम्ब्याउने र भारतीय संस्थापनको रुचीअनुशार चल्ने हो । अहिले […]
बाबुरामको नजरमा माओवादी केन्द्र नै देशकै पहिलो भ्रष्ट पार्टी, लगाए यस्तो आरोप
Posted on: April 14, 2017Posted by: netra
बैशाख – १ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सयोजक डा बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले सत्ताधारी पार्टी माओवादी केन्द्र नै देशकाे पहिलाे भ्रष्ट पार्टी रहेकाे अाराेप लगाएका हुन् । सयोजक भट्टराईले शुक्रबार माअाेवादी केन्द्रप्रति अाक्राेसित हुँदै आफ्नो अफिसियल ट्वीटरमा गम्मीर अाराेप सहितकाे ट्वीट गरेका छन् ।उनले माओवादी केन्द्र चुनाव […]
यस कारण डिभोर्स भएको थियो यी नेपाली सेलिब्रेटिहरुको
Posted on: April 14, 2017April 20, 2017Posted by: netra
अहिलेको समयमा ब्रेक अप, विवाह र डिभोर्स सामान्यजस्तै भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि कलाकारले गर्ने डिभोर्स र ब्रेक अप त मिडियामा छर्लंगै हुने हुँदा पनि धेरैको ध्यान जाने गर्छ । यी हुन् डिभोर्स भएका नेपाली कलाकार । उनीहरुको विछोडको कारण यस्तो छ । १) प्रियंका कार्की — यति बेलाकी निकै व्यस्त नायिका प्रियंका कार्कीले रोचक […]
यी हुन् २०७३ का सफल चलचित्रहरु
बैशाख – १ । २०७३ साल नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि सन्तोषजनक रह्यो । केही फिल्मले उत्साहजनक उपलब्धी गरेका छन् भने केही फिल्मले स्वदेशमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि सफलता पाएका छन् । यस वर्षमा करिब ८५ वटा चलचित्रहरु प्रदर्शनीमा आए । तर, सबैले लगानी भने उठाउन सकेनन् । केहीले भने आशा गरेभन्दा धेरै ठूलो सफलता हात […]
सार्वजानिक यातायातहरुले मात्र हैन, भीआपीको सवारीसाधनले पनि हर्न बजाउन पाउँदैनन् (भिडियोसहित)
Posted on: April 13, 2017April 17, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
ट्राफिक प्रहरीले बैशाख १ गते बाट काठमाडौं उपत्यकामा हर्न निषेध गर्ने घोषण गरेसंगै यसको बारेमा काठमाडौंमा सकरात्मक तथा नकरात्मक टिप्पणी सुनिन थालेको छ । ‘हर्न नबजाए त दुर्घटना हुन्छ । ’ ‘हर्न नबजाए लौरौले बाटोमा हिड्ने यात्रीलाई ट्वाक्क, ट्वाक्क हान्दै पन्साउनु त । ’ अहिले यस्तै कुराहरुले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । थोरैले हर्न निषेधलाई […]
नयाँ शक्ति सहित ६८ वटा दलले सिंहदरबार र संसद भवन घेराउ गर्ने (भिडियोसहित)
Posted on: April 13, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
नयाँ शक्ति नेपाल सहित ६८ वटा दलहरुले आफुहरुलाई निर्वाचनमा जान नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ शक्ति नेपाल सहितका अन्य दलहरुले यो घोषणा गरेका हुन् । दलहरु स्थानिय निर्वाचनमा जान तयारी गरिरहेकै अवस्थामा ब्यावस्थापिका संसदले स्थानिय तह निर्वाचन तह ऐन २०७३ जारी गरि आफु बाहेक अन्य […]
कसैको सोर्स चाहिँदैन, सिक्नुस आफ्नै बलले गतिलो जागिर खाने तरिका (भिडियो)
Posted on: April 12, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत ३० । जागिरका लागि सोर्स फोर्स कसरी लगाउने ? कुन नेताको चाकडी गर्ने, कुन मन्त्रीसँग कहिले भेट्ने ? यस्ता प्रश्नको खोजीमा भौतिरिने युवाहरु धेरै छन् । नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जागिरका लागि कसैलाई नमस्कार गरेर ज्यू, हजुर गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । युवाहरुकालागि करियर विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा […]
भारतीय सेनाको जागिरः तलब मध्यम, विभेद छैन
Posted on: April 12, 2017April 12, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत ३० । सेनाको जागिर धेरैका लागि प्रतिष्ठाको विषय हुने गर्छ । कमाइको दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा बेलायतको लाहुरेको शान नै बेग्लै छ । बेलायतको सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण धेरै भए पनि संख्यात्मक हिसाबले धेरै कम युवाहरुले मात्रै प्रवेश पाउँछन् । बेलायती सेनामा अहिले करिब ४ हजार मात्रै गोर्खा छन् । बर्सेनि २ […]
कालोबजारी गर्ने एक नम्बर व्यापारी बने महासंघको नेता
चैत–३० । निजी व्यवसायी व्यापारीहरुको सबैभन्दा ठूलो संगठन उद्योग बाणिज्य महासंघको बागडोर एक नाफाखोरको नेतृत्वमा जाने निश्चित भएको छ । कानुनले तोकेभन्दा धेरै गुणा बढी नाफा असूलेर बजाज मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएका शेखर गोल्छा नामक व्यापारीले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव जितेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने संशोधति विधानअनुरुप अबको दुई […]
पहिलो पटक आकाशमा जहाज उडेपछि गाईबस्तु कराउन थाले, केटाकेटी रुन थाले (भिडियोसहित)
Posted on: April 11, 2017April 11, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत २९ । सय काटिसक्नु भएकी हजुरआमा डम्बरकुमारी ढकाललाई आफ्नो उमेर ठ्याक्कै याद छैन । ७८ वर्षीया बुहारी अम्बिकादेवी ढकालका अनुशार उहाँले सय वर्ष पार गरिसक्नु भयो । ओखलढुंगामा जन्मनु भएकी डम्बरकुमारी ढकालका चार जना त जनातिनीहरु छन् । जनाति/जनातिनी भनेको नाति/नातिनीका पनि नाति/नातिनी हुन् । नेपालआज बृद्ध हजुरामा डम्बरकुमारी ढकालको निवास भक्तपुर बाल्कोट पुग्दा […]
१९५० को सन्धि एकदम ठीक छ, फेरबदल गर्न आवश्यक छैन (भिडियोसहित)
चैत २९ । राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले नेपाल र भारतबीच सन १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा कुनै पनि फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । नेपाली पक्षले वर्षौंदेखि १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएको छ । नेपालले असमान मान्दै आएको सो सन्धि नेपालको हितमा रहेको विश्लेषक सुवेदी दाबी गर्छन् । […]
नेपाल प्रहरीको २५ औँ प्रहरी प्रमुखमा अर्याल
Posted on: April 10, 2017Posted by: netra
चैत्र – २८ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई बढुवा गर्न निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत डिआइजी अर्याललाई आइजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सबैभन्दा वढी अंक प्राप्त गरेर अर्याल आइजीपीमा बढुवा भएको बताइएको छ । सरकारले […]
काठमाडौंको मेयरमा गगन थापासँग भिड्न मन छ (भिडियो)
Posted on: April 9, 2017April 10, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
केशब स्थापित, पूर्व मेयर काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको छ । तपाईको नाम पनि काठमाडौंको मेयरका रुपमा चर्चामा छ । तपाईको आफ्नो तयारी चाहिँ कस्तो छ ? मेरो तयारी भन्दा पनि, मैले यसबारे पार्टी अध्यक्षसँग दुई तीन चरणमा कुराकानी गरेको छु । उहाँले जो आए पनि काठमाडौं जित्ने उम्मेदवार हुनु पर्छ भन्नु भएको […]
भगवान लोकका बाबालाई चिठ्ठीः पृथ्वीमा त छोरीलाई पेटमै मार्छन्, ति शिशुहरुसँग हजुरको भेट भयो ?
Posted on: April 9, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–सम्झना शाक्य (मां प्रेम प्रार्थना) बाबा, पृथ्वीलोकमा मलाई सञ्चै छ । भगवानको लोकमा हजुरलाई कस्तो छ ? सधैं सोच्थेंँ मेरा ‘बाबा भएको भए यस्तो भन्थे, उस्तो भन्थे । आज चाहिं अकस्मात महशूस गरें, ‘अरे मेरो बाबा कहाँ जानुहुनेछ र ?’ आफ्नो छोरीको लागि आफ्नो बाबा सधैं हुनेछ, शरिरमा वा शरिरभन्दा माथि । हुन पनि कस्तो अचानक […]
निर्देशक दीपेन्द्र भन्छन– घामपानीमा दया र केकीबाहेक अरुकाे विकल्प थिएनन् (भिडियोसहित)
Posted on: April 7, 2017April 7, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
जीवनमा धेरैजसो कामहरु योजना बनाएर गरिदैनन् । एकपछि अर्को गर्दै मानिसले नयाँ नयाँ कामहरु गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा कोही सफल हुन्छन् त कोही असफल । धेर्रैले योजना मात्र बनाएर पनि समय कटाइरहेका हुन्छन् । दीपेन्द्र लामा फिल्म समीक्षक हुँदै फिल्म निर्देशक बनेका छन् । उनी यो यात्रामा कुनै योजना बनाएर निस्केका हैनन् । काम गर्दै […]
‘साझामा यस्तोसम्म भ्रष्टाचारः ५५ लाखको मेसिनको डेढ करोडको बिल’(भिडियोसहित)
Posted on: April 7, 2017April 7, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुन् । अध्यक्ष शर्माले साझालाई घाटामा पुर्याउनेहरुको बाँच्ने अधिकार नहुने बताएका छन् । उनले साझामा बसेर अनियमितता गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा उनले साझा सुधारको प्रतिबद्धता, साझा डुबाउनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरु लागू गर्ने जनाएका छन् । प्रस्तुत छः अध्यक्ष […]
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस, नेपालमा ८ लाख ९० हजार डिप्रेशनको शिकार
Posted on: April 7, 2017April 7, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत्र २५ । आज अप्रिल ७ अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज मनाईंदैछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच.ओं) को स्थापना दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष अप्रिल ७ का दिन विश्वभर स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ । डिप्रेसनबारे जानौं, खुलेर कुरा गरौं, र डिप्रेसन रोकथामका सेवाहरु वृद्धि गरौं भन्ने नाराका साथ डब्लु.एच.ओं आवद्ध […]
आयोगले सार्वजनिक गर्यो चुनावमा भाग लिने दलको नामावाली ८० दलले भाग लिन पाउने (सूचीसहित)
Posted on: April 4, 2017April 4, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत्र २२ । निर्वाचन आयोगले स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुको नमावाली सार्वजनिक गरेको छ । आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नामावलीअनुसार ८० दलले भाग लिन पाउने भएका छन् । निर्वाचनमा दल दर्ता गरेका विभिन्न दलहरुको सूची प्रकाशित गरेपछि दलहरु आफ्ना विभिन्न कार्यक्रम लिएर अब प्रचार प्रसारमा लागेका छन् । दलहरुको सूची हेर्नुहोस्
जनप्रतिनिधिलाई पैसा खर्च गर्न पाउने अधिकार नदिने हो भने राजनीति आफै सुध्रिन्छ (भिडियोसहित)
Posted on: April 4, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–डा. सुनिलकुमार पोखरेल । प्रवन्धक, नेपाल टेलिकम (विज्ञ, जातीय पहिचान र स्रोत व्यवस्थापन) डा. सुनिलकुमार पोखरेल नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक हुन् । उनी पढाईले सिभिल इन्जिनियर भए पनि उनको रुची देशको नीति निर्माणमा छ । त्यही भएर उनले अमेरिकाबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । डा. पोख्रेलले स्थानीय विकासमा इञ्जिनियरहरुको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट […]